DOORANAYE YAA DIIDAN?.
Maxmed xasan yusuf (shariifka)
Su’aashan ayaa ah mid ay is waydiinayaan in badan oo ka mid ah dadkiii goob jooga u ahaa qaabkiii layaabka lahaa ee ay udhacaday codbixintii iyo sida lama filaanka ahayd ee ay guushu u raacday madaxwayne c/laahi yusuf axmed kadib markiii uu helay in kabdan 180 cod uuna noqday madaxwaynihii afraad ee ay yeelato jamhuuriyada somaliya.
Waxaa ay hayd mid lama filaan ku noqtay in badan oo kamid ah siyaaasiyiinta culuma -awdiinka iyo bulshada qaarkeed gaar ahaan kuwa reer muqdisho oo aygu u arkayey kuna naaloonayay in madaxwaynanimada somaliya ay ayagu dhaxal u heleen oo ay tahay mid aan marna gorgortan gali karin ee ay tahay wax somali wayn looga baahan yahay in ay kala doortaan labo nin oo reer muqdisho ah sidiii ka dhacday CARTA ee ay isugu soo hareen c/qaasin iyo cadow ugu danbayntiin uu ku soo baxay c/qaasin.
In kastoo fikradaasi ay jirtay oo ay qabeen xitaa siyaasiyiinta reer muqdisho badankooda hadana qaar kamid ah siyaasiyiinta ama dadyoowga codkood ugu deeqay c/laahi si uu madaxwayne unoqdo ayaa qabay figrad taa gadisan oo ah in kurisgu uu soomaalida ka dhaxeeyo xaqna uu u leeyahay muwaadinkasta oo u qalama ama buuxiya shuruudaha looga baahan yahay in uu kafariisto.
Waxaan ay u arkeen in c/laahi uu yahay midka soo celin kara ama shaqsiyada ka bixi karta in uu soo celiyo sharftii iyo karaamadii ummada ee luntay lana la’aaba wax soo celya mudo 14 sano ah.
Inkastoo laqbatay shirar badan la iskuna dayey in dowlad loo sameeyo dadka somaliya hadana natiijadu ma noqon mid mira dhasha ee waxaa ay noqonaysay mar walba mid lagu hungoobo.
Marka aan kasooo tagno qaabka layaabka lahaa ee ay wax u dhaceen waxaa jira shaki laga qabo in ay ka horyimaadaan dowlad cusub qaarka mid ah siyaasiyiinta ay sida aadka ah isaga soo horjeedeen c/laahi yusuf, ragaan ayaan marna jaclayan in ay arkaan c/laaji yusuf oo madaxwayne ka ah dadlka somaliya.
Waxa la arkayay qaar ka mid ah siyaasiyiinta oo isaga soo baxay goobtiii lagu cod bixinayey oon sugin natiijada doorashadaba kadib markii ay dareemeen qaabka iyo sida wax u socdaan ileen waxaa la yiri (NIN WAYNI WADKIISA WAA YAQAAN)
Waxaa ay u see caraabeen hoteeladii ay daganaayeen ayagoo caga jiid ah una muuqda kuwo aad u daalan. Qaarka mid ah ragaas oon jeclayan c/laahi shaqsiydiisa ayaa ayagu waxaa ay goob jooga u ahaayeen ilaa ay dhamaatay codbixinta waxaan dhagahoodu ay maqleen gudoomiyihii barlamanka oo ku dhawaaqaya natiijada cod bixinta sidoo kale indhahoodu waxaa ay arkeen c/laahi oo ku fariistay kursigii loogu tala galay in uu ku fariisto madawyanaha jamhuriyada waxaa dhamaaday saacadaas wixii ka danbeeye tartankii loogu jiray kursiga madaxwaynenimada.
Inkata oo uusan war rasmi ah oo ku wajahan diidmada dowalada uusan ilaa iyo hada ka soo bixin ragaas aan soo sheegnay hadana waxaan shaki ku jirin in aysan marna raali ka noqonaya shaqsiyada c/laahi walooo in badan oo ayaga ka mid ah ay quudaranayaan in laga qayb galiyo dowalada cusub oo ay helaan qaybo fiican oo wax ku ool ah oo ay ugu horayso Ra’iisul wasaare ama ugu yaraan wasiir qiima leh.
Ragaan yaa ah kuwo kucaan baxay sida wax loo burburiyo ama looga horyimaado wax la soo dhiso waxaan ay mar walaba ka heleyeen gacan iyo taageero dowalado shisheeye oo jecel in somalidu ku si jirto qaska iyo jahawareerka siyaasadeed.
Waxaan shaki ku jirin in ay haystaan Hub aad u tira badan oo ay ku iibsadeen hantidii ay ka bililiqeen qarankii somaliya sidoo kale waxaaa ay haystaan dad aan in badan kala garan xumaanta iyo samaanta oo ah malayshiyoonin da’yar ah oo badankoodu ku caqliyeyestay burburka iyo qaran la’aanta wax kaliya oo ay yaqaanaan ay tahay sida loo rido qoryahay daraandooriga u dhaco ama sida loo agaasimo isbaarooyinka gaadiidka yimaada marka laga qaadayo lacagta baada ah sidoo kale waa kuwo aad u jecel hogoomiyayaashood ama dagaal oogayaashood waxaan ay u hayaan kalsooni aad u wayn waxaana ay ugu yeeraan magacyo ay ka muuqto xushamad iyo maamuus sida ODAYGII IYO DUQII oo kale.
Waxaa la wad og yahay in in badan oo kamid ah ragaani ay yihiin kuwo si sharci daro ah u haysta hanti aysan lahay oo isugu jirta mid qaranku lahaa iyo mid qoysas lahaayeen, qaarkood waxaa ayba haystaa gobolo ay ka bara kiciyeen dadkii lahaa, waxaan ay samayteen Garoomo ay kadhoofshaan Xashiishka ay ku beeraan beerihii qaranka ee lagu beeri jiray Badarka iyo Bariiska.
sidoo kale waxaa ay samaysteen dakado ay ka dhoofshaan geedaha ay gubaan, kalana soo dagaan hubka uga yimaada dalalka ku taageera qaska iyo jahawreerka ay ka wadaan dalka.
sidaa darteed marna ma jecla in ay arkaan dowlad ka dhalata gayiga somaliya oo soo celisa kala danbayntii xasiloonidii iyo cadaaladii waxaana ay diyaar u yihiin mar walba in ay kala horyimaadaan dagaal hubaysan cid waliba oo isku dayda in ay soo celiso kala danabayntii iyo xasiloonidii.
Hadaba waxaa la is waydiinyaa dowaldu sidee u wajihi doontaa qolyahan, ma waxay siin doontaa bililaqada ay haystaan wax ka badan, hubkana waa ka iibin doonta, ayagana waxaa ay u magacaabi doontaa jagooyin sar sare? Mise waxaa ay ku qaadi doontaa dagaal hubaysan oo waliba loo adeegsanayo ciidamo isugu jira kuwa somali ah iyo kuwo dibada laga keenay si loo soo qabqabto looguna soo oogo danbiyadii ay galeen iyo dhibaatadii ay ugaysteen dalka iyo dadka somaliyeed muda 14 sanao ahayd?
Kaliya ma ahan dagaal oogayaasha kuwa la dhihi karo waa ay diidan yihiin Dowalada cusub ee waxaa jira dadyow kale oo dhabtii ka mayal adag kuwa aan soo xusnay, waa kuwa loo yaqaan Wadaaadda ama ururo diimeedayada ka jira wadanka qaarkood waa ay ka duwan yihiin qabqanlayasha iyo siyaasiyiinta wax diidan, waana ay ka shaqsiyad fiican yiihin kana nadiifsan yihiin, diidamadoodu waxaa ay ku salaysan tahay qaab Diimeed walow baryahan danbe aysan ka marnayn mid shaqsiyadeed ama Qabiil waxaana ay qabaan in c/laahi uu yahay nin cadow u ah diinta iyo dadkeeda gacansaarna la leh dalalka reer galbeedka iyo dowlad itobiya oo ay u arkaan in ay tahay cadowga islaamaka, waxaana ay shaki galiyeen qaarka mid ah kuwood xag jirka ah islaanimada c/laahi yusuf si ay ugu qiil helaan diidmadooda iyo ka horimaatinkooda.
Waxaan la wada xasuustaa in ay ku dagaalameen gobolada loo yaqaan maanta P/L sanadkii 1992 iyaga iyo c/laahi yusuf, inkastoo uu dhamaaday dagaalkii hubaysnaa cid kastaaba guusha ah dadka la laayay ha ku faantee ama qaladka dagaalka haba la saaree, hadana waxaa u bilowaday xiligaas wixii kadanbeeyay c/laahi iyo waadaada dagaal siyaasadeed oo aad uxun, waxaana ay arintu sii xumaaatay ama ay cirka isku sii shareertay kadib markii ay taageereen oo waliba ay ka mid noqdeen dowaldii carta lagu soo dhisay ee uu madaxwayanaha ka ahaa c/qaasim.
Intaa kuma akayn dagaalka wadaadada iyo c/laahi ee waxaa ay wadaadadu qayb ka qaateen kacdoonkii shacabaka ee ka dhacay P/L lagagana horyimid c/laahi loogana soo saaray magaalada Bosaso iyo waliba doorashadii lagu doortay Jaamac Cali Jaamac magaalada Garoowe.
Dhab ahaantii ma ahayn mid ay urur ahaan ama koox ahaan uwada dhamaayeen laakiin waxaa ay ahayd mid ay hurinayeen fidnooyinkaas iyo shirqoolada ay uga sooo horjeedaan odayga ayagoo huwan shaarka qabiilka ama ku dhex jira beesha ay ka dhasheen.
Ma ahan wax lalayaabo asbaabah keeni kara ama dhalin kara mucaaradnimada iyo ka horimaatinka ay ka soo horjeedaan c/laahi iyo guud ahaan dowalada ay dhiseen dadyow aan islaam ahayn ama leh dastuur aan ahayn midka qur’aanka ……inkastoo tii cartaba tageero fiican ay siiyeen….. mar hadii aad taqaano falsafada iyo aydoolajiyadood ku salaysan islaanimada xaga jirka ah ee ay aaminsan yihiin.
Wadaado ma ahan kuwa haysta hub badan sida qabqablayaasha marka laga reebo kuwa jooga magaalada muqdisho laakiin waxaa ay haystaan dhaqaale aad u badan, waxaana ay yihiin dad isku xiran sidaa darteed waxaa ay awoodaan in ay dagaal hubaysan la galaan dowalda cusab oo ay ka horyimaadaan xilikasta iyo markasta oo ay doonaan iyagu, waxaana suuragal noqon karta in ay somaliya noqoto sida Afgaanistaan iyo Ciraaq.
Hadaba waxaa is waydiin leh hadii dowalda uu madaxwayanah ka yahay c/laahi yusuf ay la timaado siyaasada ku salaysan in la tix galiyo afkaarta lana dhowro qofku wax uu aaminsan yahay oo ah diin iyo fikirka anagoo og in shacabaka somaliyed u yahay shacab muslim ah, markasi wadaadu ma taageeri doonaan Dowalda noo dhalatay oo ma ka mid noqon donaan? Amase ugu yaraan waxaa ay ka dayn doonaan lugooyda iyo jilaafayanta inta ay cagaheeda isaga taagayso, mise waxaa ay isticmaali doonaan siyaasada ah (c/laahi maalinbuu qabasha lahaa) qaar badan oo ka mid ah ragaan oon la sheekasyatay ayaa ii sheegay in taageero la taageeraa dowalda c/laahi ama ka hor imaatinka laga horyimaadaa ay hadeer tahay dag-dag ee loo baahan yahay in la fiiriyo siyaasada ay la timaado Dowalda cusub ee maxwayanaha u yahay mudane c/laahi yusuf axmed.
W/Q: Maxmed xasan yusuf (shariifka)